Marmaray လေ့လာရေးခရီး Times သတင်းစာ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်Marmaray ပျံသန်းမှု Duration
Marmaray ပျံသန်းမှု Duration
04 / 08 / 2019 Levent Ozen 34 အစ္စတန်ဘူလ်, လောက, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အလင်းကိုရထားပို့ဆောင်ရေးစနစ် (LRT), ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ, ဗွီဒီယို 0
marmaray မြေပုံနှင့်အချိန်ကာလ marmaray
Marmaray ပျံသန်းမှု Duration: ဆက်လက်အတွက် Bosphorus နှစ်ဖက်စလုံးအပေါ်ရထားလမ်းချိတ်ဆက်တံ့သော Marmaray စီမံကိန်းများ၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အလုပ်။ အဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်ရေလက်ကြားအောက်မှာဖြတ်သန်းမီးရထားလိုင်းများ, ရထားလမ်းဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကွန်နက်ရှင်အားဖြင့်ချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကမ်ပိန်းနှင့် Marmaray Marmaray တာဝန်ခံအကြောင်းအသေးစိတ်သတင်းနှင့်အတူသင်နှင့်အတူဖြစ်ကြသည်။
လိုင်း, Kazlicesme မြေအောက်ဝင်တော်မူမည် အသစ်ကမြေအောက်ဘူတာရုံအစ္စတန်ဘူလ်ဟာ Bosphorus အောက်မှာရှောက်သွားပါလိမ့်မယ်, အသစ်တစ်ခုခြောက်ဘူတာရုံÜsküdarနှင့်Söğütlüçeşmeချိတ်ဆက်ထားခံရဖို့နဲ့အခြားနေရာများထပ်မံမျက်နှာပြင်မှလာကြလိမ့်မည်, ထိုYenikapıနှင့် Sirkeci တလျှောက် scroll ပါလိမ့်မယ်။
အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့ Marmaray စီမံကိန်းကိုလွန်းကြီးတွေဟာအလုပ်များရေလက်ကြားတံတားလမ်းအတွက်အသွားအလာကိုထိခိုက်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်။ လူတွေက Marmaray Bosphorus နှင့်အတူအလျင်အမြန်ပြောင်းရွှေ့ရန်ထက်၎င်းတို့၏ကားများနှင့်အတူသွားပိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်။
အဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်ရေလက်ကြား Marmaray Marmaray လိုင်းကူးချင်သောသူသည်ခရီးသွားများအတွက်၏စိတ်ထဲတွင်အတွက်အကြီးမားဆုံးဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဘယ်အရာကိုအချိန်များတွင်အလုပ်လုပ်ကြမည်နည်း
အဆိုပါ Marmaray စီမံကိန်း၏ဤပြဿနာကိုမှအဖြေကိုကြိုတင်အချိန်တိုအတွင်း၏နိဒါန်းမှထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ခံရဖို့မျှော်လင့်ရသည်။ အဆိုပါ Marmaray စီမံကိန်းကိုအောက်တိုဘာလ 29 2013 ta အတွက်ဖွင့်လှစ်ရန်မျှော်လင့်နေသည်။ Marmaray အချိန်ဇယား, နာရီအလုပ်လုပ်အခါနာရီအချိန်သင်နာရီကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကိုမှပြောင်းရွှေ့အကြောင်းကိုမဆိုရှင်းပြချက်ပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။
Gebze နှင့် Marmaray Halkalı 105 မိနစ်ဖြစ်။
Marmaray Bostancıနှင့်Bakırköy 37 မိနစ်အကြားဖြစ်လိမ့်မည်။
Sogutlucesme နှင့် Yenikapi Marmaray ထံမှ 12 မိနစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါ Marmaray အကြားÜsküdarနှင့် Sirkeci4မိနစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
Marmaray စခန်းများ, Gebze ကိုလည်းစမ်းရေတွင်း၌Söğütlüတူညီတဲ့ဦးတည်ချက်အပေါ်မှတ်တိုင်များလေ့ကျင့်ရန်အသုံးပြုရလိမ့်မည်။ အဆိုပါ Marmaray ရထားလမ်းကို အသုံးပြု. သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့်Üsküdarမပါဘဲ willowy စမ်းရေတွင်း၌Söğütlüçeşmeကနေလူတွေရပ်, သူတို့ကအဲဒီမှာအနေဖြင့်ဥရောပဘက်ခြမ်းမှအကူးအပြောင်းဖြစ်စေမည်။
Halkalı - Gebze လိုင်း
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အရှည်ဆုံးမြေအောက်ရထားလမ်းကြောင်းများကြောင်းအကြီးဆုံးရှိခြင်း Halkalı - Gebze မြေအောက်ရထားလိုင်းကိုအပေါ် 42 စုစုပေါင်းရပ်တန့်တွင်တည်ရှိသည်။ သူတို့ကို၏ကျန် 14 28 ရပ်နားအစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့ Anatolian ခြမ်းနေစဉ်ဤအရပ်, ထိုဘူတာရုံ၏ဥရောပဘက်ခြမ်း၌တည်ရှိ၏။ ဤရွေ့ကားဘူတာအသီးသီးဖြစ်ကြသည်:
အစ္စတန်ဘူလ်က Metro ၏ interactive မြေပုံ
Marmaray Tube မြေပုံ rayhab
တူရကီအစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများပျံသန်းမှုအချိန်နှင့်လေယာဉ် Duration 12 / 07 / 2019 အချင်းချင်းမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းဟာအစ္စတန်ဘူလ်-တူရကီ YHT ပိုကိုအလွန်လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်စီမံခန့်ခွဲထားပါတယ်သောဤနှစ်ခုလူဦးရေမွို့၌သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အသွားအလာသိပ်သည်းဆတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပို့ဆောင်ရေး TCDD အပေါငျးတို့သတီထွင်မှုနှင့်ဤလယ်ကွင်းထဲမှာလုပ်နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေအလျင်အမြန်စနစ်သို့ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ခရီးသည်နှင့်အတူဤအမြန်နှုန်းမြင့်ရထားပျော်စရာနဲ့ပျော်စရာဖို့ခရီးသွားလာရန်အခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်းပြီ။ အစ္စတန်ဘူလ်-တူရကီမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထား, တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်နှင့်အစ္စတန်ဘူလ်-တူရကီအကြားအပြန်အလှန်6နေ့စဉ်ပျံသန်းမှု operate ။ ကျန်းကျော်အစ္စတန်ဘူလ် Pendik, အသီးသီး Gebze, Izmit, Arifiye, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir, တူရကီ, Sincan နှင့်415 နာရီကနေရထားမိနစ်ရောက်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အစ္စတန်ဘူလ်-တူရကီအထက်တန်း ...
တူရကီ-Eskişehirအမြင့်မြန်နှုန်းရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများပျံသန်းမှုအချိန်နှင့်လေယာဉ် Duration 12 / 07 / 2019 Eskisehir Eskisehir-အစ္စတန်ဘူလ်-တူရကီအထက်တန်းမြန်နှုန်းရထားတူရကီလိုင်းအတွက်တည်ရှိသောမှတ်တိုင်များတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တူရကီ-Eskişehirမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားနေ့တိုင်းလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ သင်ဤလိုင်းမှတစ်ဆင့်5အချိန်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, တစ်ချိန်တည်းမှာတူရကီ-Eskisehir လိုင်းလည်းထည့်သွင်းထားပါသည်။ တူရကီ-Eskisehir အချိန်တစ်ရက်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလိုင်းကိုလုပ်ဖို့613 အချိန်တဦး။ ဒါဟာရေတိုရေရှည်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤအချိန်ကားများအတွက်စားရန်အရပျမဟုတျပါဘူး။ သောကြောင့်တူရကီ-Eskişehirရဲ့ခရီး၏မြို့ရဲ့အဓိကရထားဘူတာရုံ၏ 1,5 နာရီအကြားကြာပါသည်။ သငျသညျရထားခရီးစဉ်စေလိုလျှင်သင်တို့သည်လည်းအစား Anlara- အစ္စတန်ဘူလ်လမ်းကြောင်းရွေးချယ်နိုင်သည်။ ...
တူရကီ Konya အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများပျံသန်းမှုအချိန်နှင့်လေယာဉ် Duration 12 / 07 / 2019 Konya-တူရကီအထက်တန်းမြန်နှုန်းရထားထံမှ ထွက်. အဆိုပါမြန်နှုန်းမြင့်ရထားတစ်ခုမှာ, အသက်ရှင်ခြင်းကိုသိသိသာသာပိုမိုလွယ်ကူနှင့်အချိန်ချွေတာစီမံကိန်းဖြစ်သည်။ ဤသည်ရထားအချိန်တူရကီကနေ 1 50 မိနစ်နှင့်အတူ Konya ၌တည်ရှိ၏။ အလုပ်နှင့်ပညာရေးခရီးသွားပြုကြလိမ့်မည်သူကိုခရီးသည်များအတွက်အထူးသဖြင့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားအတော်လေးအကျိုးရှိခြင်းနှင့်ချွေတာဖြစ်ပါတယ်။ ပို့ဆောင်ရေးတူရကီပြည်နယ်မီးရထားမြန်နှုန်းမြင့်ရထားများနည်းပညာနှင့်ခေတ်မီနည်းစနစ်များအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပြီးစနစ်ကဒီဦးတည်ချက်အတွက်အပေါငျးတို့သနည်းပညာများပေါင်းစပ်ပေးနိုင်သည်။ Konya-တူရကီအထက်တန်းမြန်နှုန်းရထားနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်7ရက်ပေါင်းလုပ်ရမည့်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီအချိန်ပျမ်းမျှကြာချိန် 1 နာရီ ...
Konya နှင့်အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများပျံသန်းမှု Duration ပျံသန်းမှုနာရီ 12 / 07 / 2019 မြန်နှုန်းမြင့်ရထားများနှင့်ပို့ဆောင်ရေး TCDD ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ဆက်လက်အပေါင်းတို့နှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားနည်းပညာအမျိုးမျိုးနှင့်တစ်နေရာတည်းတွင်အရည်အသွေးနှင့်ခေတ်သစ်န်ဆောင်မှုနှစ်ခုလုံးကိုသုံးပြီးခရီးသည်များ၏ခေတ်မီနည်းစနစ်များဆက်ကပ်။ Konya-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားနေ့၏3အချိန်သယ်ဆောင်။ Pendik, အစ္စတန်ဘူလ်ရထားပေါ်တွင်နောက်ဆုံးမှတ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။420 နာရီကြာချိန်, ကမိနစ်ကြာပျမ်းမျှအချိန်။ Konya-အစ္စတန်ဘူလ်ရထားမှတ်တိုင်များ, အသီးသီးEskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, Gebze နှင့် Izmit ဖြစ်ကြသည်။ စံများနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အချိန်နှင့်3အပါအဝင်နှစ်ဦးကလက်မှတ် options များ, ကွဲပြားခြားနားသော font ကိုရှေးခယျြစရာနှင့်အတူကားများဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ Pullman စမီးရထား, Pullman စအတွက်စီးပွားရေးကို ...
အစ္စတန်ဘူလ်နှင့် Konya မြန်ရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများပျံသန်းမှု Duration တောင်တက်နာရီ 15 / 07 / 2019 အစ္စတန်ဘူလ် Konya အမြင့်မြန်နှုန်းရထား3ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်သယ်ဆောင်။ ကြောင့်ဒီရထားလိုင်းကိုများ၏ပြင်းထန်မှုဖို့အချိန်အတွက်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သောယခင်က23 နေ့ကလေ့လာရေးခရီး။ ဒီပိုခရီးသည်တစ်ရက်သွားလာရန်ဤအခွင့်အလမ်းကိုပေးအပ်ခဲ့ကြသည်ခွင့်ပြုပါတယ်။ Konya ရထားပေါ်တွင်နောက်ဆုံးမှတ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရထားလမ်းဟာမိနစ်420 နာရီနှုန်းအဖြစ်အချိန်ကာလအတွင်းပြီးစီးခဲ့သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်-Konya အမြင့်မြန်နှုန်းရထား, အသီးသီး Gebze, Izmit, Arifiye, Bilecik, Bozüyük, Eskişehirအဆိုပါ pass ကိုရပ်တန့်။ စံများနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အချိန်နှင့်3အပါအဝင်နှစ်ဦးကလက်မှတ် options များ, ကွဲပြားခြားနားသော font ကိုရှေးခယျြစရာနှင့်အတူကားများဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ စီးပွားရေးကို, စီးပွားရေး Pullman စ, Pullman စစီးပွားရေးလုပ်ငန်းညစာအတွက် Pullman စမီးရထား ...
2019 နေ့စဉ် Express ကိုရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများပျံသန်းမှုအချိန်နှင့်လေယာဉ် Duration 04 / 08 / 2019 2019 နေ့စဉ် Express ကိုရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများနာရီတောင်တက်နှင့်တောင်တက် Times သတင်းစာ: ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအတွက် Long ကအကွာအဝေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုအလွန်အတူတကွခညျြနှောငျဆက်လက်ဦးချင်းစီကတခြားအစာရှောင်ရထား, ခရီးသည်များနှင့်ယဉ်ကျေးမှုထံမှကွဲပြားခြားနားသောမြို့များရိုးရှင်းစွာ။ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ကားများအမျိုးမျိုးနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောမြို့ကြီးများအတွက်ခရီးသွားလာအမှုဆောင်ခြင်းမြန်နှုန်းမြင့်ရထားမြင့်မားတဲ့နည်းပညာ features တွေနှင့်အတူအကြီးအပျနှံနှင့်ရထားနှင့်အတူကိုပြင်ဆင်နေကြသည်။ ပို့ဆောင်ရေး TCDD ဒီလယ်ပြင်၌ရှိသမျှသောတီထွင်မှုများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေနဲ့သငျသညျစနစ်သို့ပေါင်းစည်းဖို့အတှကျ insatiable ခရီးသွားခွင့်အလမ်းများအမြန်ဆုံးလမ်းပေးထားပါတယ်။ ကျနော်တို့ကားကိုသှားဖို့နဲ့သင်ပိုမိုချွေတာခရီးသွားလာခြင်းထက်အချိန်တိုအတွင်းရောက်ရှိ ...
အပိုဆောင်းအချိန်Torbalıyမျှအချိန်Aliağayမှ 28 / 10 / 2013 Torbalıyအပိုဆောင်းအချိန်, Aliağayမရှိအချိန်: Aliaga-Izmir İZBANအားဖြင့်ခရီးသွားလာနိုင်ငံသားများအကြား; Aliaga သူတို့ကမြို့လယ်မှာရှိတဲ့နောက်ဆုံးမှတ်တိုင်တစ်ချိန်ကနေရာချခံရဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်နောက်ထပ်လေယာဉ်ခရီးစဉ်များစည်းကြပ်အတူတူပင်အခြေအနေမှာTorbalı'yaအလောင်းတော်ထားနှင့်အချို့သောမြူနီစီပယ်ဖို့ဘတ်စ်ကားပေးရန်မ '' သငျသညျကိုခစျြလမ်းများ, သူတို့ပြော, အကြှနျုပျကိုပို့ဆောငျ 'ဆိုတဲ့သီခငျြးမြားပြန်ပြောပြသည်။ ALİAĞAလျစ်လျူရှုဘယ်မှာ '' ညျနကွေ။ နိုင်ငံသားများရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးစီခရိုင်အတွင်းရှိ 90 မိနစ်ဝန်ဆောင်မှု, "Izmir တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Aziz က Kocaoglu မှအကျိုးလိုသောAliağalı၏တောင်းဆိုချက်များကိုလျစ်လျူရှုမှတပါးမက်ထရိုကနေလက်စွပ်ဘတ်စ်ကားများ၏ Place ကတည်းကကြောင်းနှင့် Aliaga ညွှန်ပြမြဲမြံစွာတည်ထားတဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့ '' İzbeနားလည် - အိတ်လိုင်း၏အပိုဆောင်းအချိန်ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားကိုပေးတော်မူ၏။ သက်တမ်းကုန်ဆုံးထံမှ Aliaga အတွက်နိုင်ငံသားများ ...